Fampiharana ho an'ny iPhone | IPhone News (Pejy 4)
Rush Rally 3 dia iray amin'ireo simulator rallye tsara indrindra izay hozahanao
Ity karazana ity dia iray amin'ireo mpampahalala azy lehibe indrindra ao amin'ny Rush Rally 3, fanontana farany an'ny saga an'ny simulator izay hahatsapa anao faingam-pandeha haingam-pandeha.
Texture, serivisy novidin'i Apple ary antsoina ankehitriny hoe News +, dia hijanona tsy hiasa intsony amin'ny faran'ny volana Mey
Ny fampiharana Texture, toy ny serivisy atolotray azy, dia hijanona tsy hiasa intsony amin'ny faran'ny volana Mey amin'ny rindranasa rehetra, na iOS na Android.
Ampidiro izao ny Infuse 6 miaraka amin'ny vaovao sy manandanja
Ilay mpilalao Infuse mahafinaritra dia tonga amin'ny kinova 6 miaraka amin'ny vaovao vaovao sy mahaliana izay ahafahantsika manohy mankafy ny sarimihetsika sy andian-tantara ankafizinay
Ny Twitter dia manavao ny fampiharana ofisialy miaraka amin'ny maody maizina vaovao
Twitter dia mialoha ny iOS 13 manaraka izay mamela antsika hampihetsika ny maody maizina, izay hitantsika tao amin'ny pejin-tranonkala, ao amin'ny fampiharana ofisialiny ho an'ny iOS.
Siri Shortcuts dia nohavaozina manampy fiasa vaovao
Ny fampiharana Siri Shortcuts dia nohavaozina mba hanampiana fiasa vaovao miaraka amin'ny fampiharana Notes.
Ny beta voalohany amin'ny tvOS 12.3 dia azo alaina ho an'ny mpamorona ankehitriny
Ny beta voalohany ho fanavaozana lehibe fahatelo an'ny tvOS 12, dia efa misy izao, na dia ho an'ny mpamorona aza amin'izao fotoana izao
Apple manavao ny famolavolana kisary amin'ny app Apple TV Remote
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia manavao ny famolavolana ny Apple TV Remote app amin'ny fanovana ny kisary misy azy amin'ny famolavolana ny fifehezana ara-batana ny Apple TV.
Fortnite dia mamela ny resadresaka am-peo amin'ny iOS ao amin'ny fanavaozana farany farany
Ny fanavaozana farany Fortnite farany dia ahafahana mamerina miresaka amin'ny feo amin'ny iOS, ankoatran'ny manampy singa vaovao hahazoana fahasalamana indray.
Telegram dia nohavaozina mba hifanaraka amin'ny VoiceOver ankoatry ny manampy fiasa vaovao
Ny fanavaozana Telegram vaovao dia mamela antsika hamafa resaka amin'ny chat manokana ary manampy fifanarahana amin'ny VoiceOver
Chicotaz, tariho ny làlan'ny Paskao amin'ity lalao ity
Efa akaiky ny Paka, ho an'ny maro dia vanim-potoana fialantsasatra hafa izao ary ho an'ny ...
Hanampy fanohanana amin'ny fizarana sy fijerena sary mivantana ao amin'ny iOS ny Twitter
Ny kaody fampiharana Twitter ho an'ny iOS dia ahitana ny safidy afaka mizara mivantana ny sary mivantana eo amin'ny lampihazo, na dia tsy misy amin'izao fotoana izao aza.
Wall Street Journal dia toa nahavita fifanarahana iray azo jerena ao amin'ny Apple News
Ny alatsinainy ho avy izao, raha ny tsiliantsofina rehetra navoakanay tato anatin'ny herinandro vitsivitsy dia hitako ...
Azonao atao izao ny manoratra mialoha ny Angry Birds: Isle of Pigs, ny hoavin'ny Augmented Reality
Rovio dia sahy amin'ny fampitomboana ny zava-misy amin'ny alàlan'ny fandefasana Angry Birds: Isle of Pigs, azontsika atao ny mitahiry azy izao hanana izany amin'ny 11 aprily ho avy.
Spotify mamaly mafy an'i Apple
Ny fifanolanana teo amin'ny Spotify sy Apple, dia nanana fizarana vaovao tamin'ny valin-kafatra navoakan'ny orinasa soedoà tamin'ny fanambarana farany nataon'ny Apple
Nohavaozina i Shazam mba hanampy fampahalalana momba ny tag bebe kokoa
Raha ny fahafantarana ny hira milalao, ao amin'ny App Store dia manana fitaovana samihafa isika izay ...
Gboard dia manolotra antsika asa fandikana amin'ny fanavaozana farany
Ny app Gboard dia nohavaozina mba hanampiana ny mpandika teny natsangana tao amin'ny app keyboard ho an'ny iOS.
Fortnite dia manolotra ny hetsika "Escape" indray amin'ny fotoana voafetra
Epic Games dia navaozina, indray mandeha indray, Fortnite hanampiana hetsika lalao vaovao antsoina hoe The Escape, izay ahafahantsika mamita olana samihafa
Google Drive dia nohavaozina manampy famolavolana endrika vaovao sy miasa kokoa
Ny app Google Drive dia nohavaozina mba hampisehoana endrika vaovao mifanaraka amin'izay ampiasain'i Google ao amin'ny G Suite.
Reraka i Spotify ary maniry ny hanadihadian'ny Vaomiera Eropeana an'i Apple ho fanoherana ny fifaninanana
Ireo bandy tao Spotify reraky ny fanaon'ny Apple dia nitaraina tany amin'ny Kaomisiona eropeana mba hiasa ny milina fanoherana ny fifaninanana.
Twttr no fampiharana fitsapana Twitter vaovao
Twitter, ny tambajotra sosialy, dia efa nitady an-taonany maro hanatsarana sy hampiharana andraikitra vaovao, ary maro no mbola tsy nahavita afa-po ...
Fiara vaovao, ny boloncho ary ny sarimiaina vaovao dia avy amin'ny tanan'ny fanavaozana Fortnite
Epic Games dia nampiasainay tamin'ny famoahana saika isan-kerinandro fanavaozana ny lalao nahomby indrindra, Fortnite, ...
Niantic namoaka ny pitsopitsony voalohany an'ny Harry Potter Wizards Unite, ilay lalao Pokémon GO vaovao nampitomboina ny zava-misy
Ireo tovolahy avy any Niantic dia nanambara fa ny Harry Potter Wizards Unite vaovao dia ho tonga amin'ity taona ity miaraka amin'ny lalao maoderina.
Ny maody maizina dia tonga amin'ny fampiharana Slack
Ny rindranasan-kafatra fandefasan-kafatra ho an'ny orinasa, Slack, dia vao nohavaozina nanampy ny fomba sosialy nandrasana hatrizay mifanaraka amin'ny efijery OLED.
Tsy tian'ny Nintendo ny hamitahan'ny mpilalao azy amin'ny alàlan'ny fividianana fampiharana
Nintendo dia mifampiraharaha amin'ireo mpandraharaha sasany ny karazana fividianana rindrambaiko atolotra azy mba tsy hanimba ny sarin'ireo mpilalao.
Evoland 2 dia misy amin'ny euro 1 fotsiny ao amin'ny App Store
Mandritra ny fotoana voafetra dia azonao atao ny mahazo ny anaram-boninahitra Evoland 2 mahafinaritra, izay ny vidiny mahazatra dia 7,99 euro, nefa izao dia 1 euro fotsiny.
Raharaha heloka bevava: ny firaisana tsikombakomba, lalao tsotra hiaraha-miasa
Ny lalao fikarohana dia mahazatra kokoa noho ny eritreretintsika, ary na dia manana mpampiasa aza isika ...
Ahoana ny fomba hahitana rindranasa vaovao ao amin'ny App Store?
Izahay dia mizara votoatiny amin'i Apple isan'andro mba hanomezana anay fampiharana manokana ho an'ny fampiasana isan'andro ny fitaovantsika.
Ny beta voalohany an'ny Switf Playgrounds 3.0 dia misy izao
Apple dia manome ny mpampiasa TestFlight ny beta voalohany amin'ny fampiharana handrindrana ireo rindranasa sy lalao Swift Playgournds 3.0
Ny sarintany harena izao dia misy amin'ny fanavaozana Fortnite farany
Ny sarintany sarobidy nampanantenain'ny Epic Games tamin'ny alàlan'ny Fortnite dia azontsika karohina sy hahazoana entana malaza
Microsoft Edge for iOS dia mamela anay handika ireo pejin-tranonkala
Ny kinova an'ny fitaovana Microsoft Edge ho an'ny Apple tantanan'ny iOS, farany manome antsika ny fahafaha-mandika pejin-tranonkala nefa tsy ilaozanao izany.
Olana manokana momba ny tsiambaratelo ho an'ny Facebook izay mamela anao hikaroka amin'ny laharana finday
Facebook, toy ny rindranasa sy serivisy maro hafa, taloha dia nanisy ny fanamarinana azy roa amin'ny alàlan'ny nomeraon-tele ...
Ny rindranasa GIPHY dia ahafahantsika miditra amin'ny GIF ary mamorona vaovao avy amin'ny mailaka Messages
Ny fampiharana GHIPY dia nohavaozina mba hanatsarana ny fahombiazana sy ny fitetezana eo anelanelan'ny GIFS izay azonay alefa amin'ny alàlan'ny rindranasan'ny Messages.
Tianao ve i Limbo? Microbian no safidy manintona indrindra
Microbian, lalao espaniola izay mifanolo-bodo tsara amin'i Limbo raha ny endrika sy ny toerana misy azy. Jereo miaraka aminay ity lalao haingam-pandeha ity.
Apple dia manazava ny fanovana ny metadata takiana amin'ny podcast
Apple dia nanitsy sy nanitsy ny sasany tamin'ireo fanovana natolony tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity.
Soor, mpilalao vaovao ho an'ny Apple Music miaraka amina fiasa mahaliana
Apple Music dia nampidirina tao amin'ny fampiharana Music an'ny fitaovantsika sy any amin'ny iTunes, misy efa fantatra ny fampiharana, fa tsy ...
Ny hitsin-dàlana Siri dia manitatra ny isan'ny fampiharana tohanan'ny azy
Siri dia nanavao ny Siri Shortcuts mba hifanaraka amin'ireo fampiharana vaovao toa ny American Airlines, Caviar, Dexcom, Merrian Dictionary Dictionary, ary ny Spectre.
Tonga ny vanim-potoana faha-8 an'ny Fortnite miaraka amina endrika vaovao maro
Fortnite Season 8 dia azo alaina ho an'ny fitaovana rehetra manohana. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ireo zava-baovao atolotray anay.
Citymapper dia mamorona ny famandrihana fitaterana voalohany
Citymapper dia mbola iray amin'ireo fampiharana malaza indrindra any amin'ny tanàna lehibe toa an'i Madrid na Barcelona noho ny vaovao ka ...
Ny EMT an'ny Madrid dia manavao ny fampiharana ary farany mampifanaraka azy amin'ny fotoana vaovao
Ankehitriny ny fampiharana EMT Madrid dia nohavaozina ho an'ny efijery iPhone X ary nohavaozina tanteraka ny fifandraisan'ny mpampiasa.
Google Maps dia mampiditra ny safidy amin'ny "Araho" ny orinasa sy orinasa eo an-toerana
Google Maps dia nanomboka nampiditra ny fitaovana "Araho" ao amin'ny iOS izay ahafahantsika mahazo vaovao farany avy amin'ireo orinasa ankafizinay
Apple dia manavao an'i Shazam amin'ny fanesorana ireo SDK mpamorona antoko fahatelo
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia manao ny iray amin'ireo fanovana lehibe indrindra ao Shazam: esory ny SDK an'ny antoko fahatelo, tsy hivarotra ny angon-tsainay intsony.
Bnext mankalaza mpisera mavitrika 100.000 XNUMX amin'ny alàlan'ny fampidirana fiasa vaovao roa
Bnext dia nanolotra endrika vaovao roa eo amin'ny sehatra hanamarihana ny tsingerintaona nanombohany. Aza adino izany.
AutoSleep dia manampy ny tontonana Today izay ahitantsika ny famintinana ny torimasontsika
AutoS sare dia manampy ny tontonana Today amin'ny endrika Apple Health madio indrindra mba hanomezana antsika ny angona rehetra amin'ny torimaso amin'ny fomba tsotra kokoa.
Ny tabilao hovercraft, Driftboard, dia misy ao Fortnite mandritra ny fotoana voafetra
Ny tabilao hovercraft an'ny Fortnite, driftboard, dia azo alaina amin'ny endriny PVP na maody lalao MTL.
Ahoana ny fomba ahazoana maimaim-poana ny vanim-potoana faha-8 an'ny Fortnite
Ho fankalazana ny Andron'ny mpifankatia, ny Epic Games dia manolotra andian-fanamby maro antsika hahazoana ny lalao ady amin'ny fizarana faha-8 maimaimpoana.
Apple dia manery ireo mpamorona hampihetsika ny fanamarinana singa roa alohan'ny faran'ny volana
Apple dia nandefa mailaka ho an'ireo mpamorona ary mandrisika azy ireo hampandeha ny fanamarinana dingana roa amin'ny kaontiny alohan'ny 27 Febroary.
Ny fiaramanidina Fortnite sy ny tsipika zip dia mahazo fanovana amin'ny fanavaozana vaovao
Fortnite update 7.40 dia manome fomba vaovao hifaneraserana amin'ireo rafitra rehefa mandeha amin'ny fiaramanidina sy amin'ny tsipika zip isika
Pixelmator dia nohavaozina manohana ny iPad Pro sy ny "tap roa" an'ny Apple Pencil
Pixelmator kinova 2.4.4 dia misy izao. Ity famoahana ity dia manampy fanohanana ny fihetsiky ny iPad Pro sy Apple Pencil "paompy indroa".
Miaraka amin'ny iOS 12.2 ny safidy "manisy marika toy ny nilalao" dia hiverina ao anatin'ny fampiharana Podcast
Ny rindranasa Podcast dia hanampy endri-javatra vaovao ao amin'ny iOS 12.2 izay efa nisy tamin'ny kinova taloha.
Azo alaina amin'ny fomba ofisialy izao ny fisintomana mandeha ho azy ny fitaovana Netflix vaovao
Ny rindrambaiko Netflix ho an'ny iOS dia nohavaozina ka nahafahana nanasongadina endrika vaovao mamela ny votoaty alaina am-pahendrena. Azavainay ny fiasan'izy io.
Ahoana ny fomba hamantarana sy hamafana kaonty diso na mampiahiahy an'ny WhatsApp
Ny sehatra fandefasan-kafatra dia nizara ampahibemaso ny sasany amin'ireo fitaovana ampiasainy hamantarana kaonty na mety hampiasaina amin'ny spam.
Ny balafomanga Pyrotechnic sy ny afo mirehitra manodidina no zava-dehibe amin'ny fanavaozana ny Fortnite farany
Ny balafomanga Pyrotechnic sy ny doro tanety no tena zava-dehibe amin'ny fanavaozana ny Fortnite farany
Gmail for iOS dia mifanaraka amin'ny iPad Pro 2018 izao
Vao nohavaozina ny rindranasan'ny Gmail mba hifanaraka amin'ny endrik'ireo efijery vaovao amin'ny iPad Pro 11 sy 12,9-inch.
Ny fampiharana Amazon Prime Video ho an'ny Apple TV dia manohana ny asan'ny X-Ray ankehitriny
Ny fampiharana Amazon Prime Video ho an'ny Apple TV dia farany mifanaraka amin'ny asan'ny X-Ray amin'ity serivisy ity, fiasa iray izay manome fidirana amin'ny fampahalalana IMBD an'ny andian-tantara na sarimihetsika
WhatsApp dia nohavaozina ary manohana ny Face ID
WhatsApp dia efa mamela anao hampiasa FaceID hidirana amin'ilay fampiharana. Azavainay ny fomba hampiasana ity asa ity mba tsy hisy hahita ny hafatrao raha tsy mahazo alalana
Ny fampiharana Facebook dia manohana ny famahana ny efijery iPhone XS Max sy iPhone XR
Volana maromaro taorian'ny nanombohany, nohavaozina ihany ny fampiharana Facebook mba hanohanana ny famahana ny efijery amin'ny iPhone XR sy iPhone XS Max.
Dr. Mario World dia ho tonga amin'ny iOS amin'ny fiandohan'ny fahavaratra
Vao nanambara ny fanombohana lalao video vaovao ho an'ny sehatra finday antsoina hoe Dr. Mario World, lalao izay ho tonga amin'ity fahavaratra ity i Nintendo
Nintendo dia nanamafy ny fahatarana ao amin'ny Mario Kart ho an'ny iPhone, fotoana hiandrasana
Araka ny loharanom-baovao akaiky ny Nintendo, i Mario Kart ho an'ny iOS dia hiaritra fihemorana tsy ampoizina sy tsy voafetra amin'ny fahatongavany ao amin'ny App Store.
Firaketana ao amin'ny App Store: tokony hanana vola 120 miliara dolara ny mpandrindra hatramin'ny 2008
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia manambara ny tombony azon'izy ireo notaterina tamin'ny mpamorona noho ny vola azon'ny App Store: 120 miliara dolara.
Ny fampiharana Apple Support dia nohavaozina amin'ny alàlan'ny fampidirana bara fikarohana vaovao
Ny fampiharana Apple Support dia nohavaozina tamin'ny alàlan'ny fampidirana tabilao fikarohana vaovao ahafahantsika mahita ireo lahatsoratra mahaliana anay indrindra.
Apple Torolàlana momba ny fanavaozana ny Apple mba hisorohana ny fanaovana hosoka amin'ny famandrihana
Ireo tovolahy ao Apple dia nanavao ireo torolàlana izay tsy maintsy arahin'ireo mpamorona hanolotra famandrihana amin'ny fampiharana azy.
Fortnite ho an'ny iOS izao dia mifanaraka amin'ny mpanara-maso MFI fa tsy amin'ny Apple TV
Ny fanavaozana farany Fortnite dia nanampy fotsiny ho an'ny mpanara-maso MFI toy ny Ninbus SteelSeries, fa tsy ny Apple TV.
Misaotra ireo mpamorona, ny fahatongavan'i "Hey Siri" amin'ny AirPods dia hita tao amin'ny beta 1 an'ny iOS 12.2, izay manamarina kinova vaovao
Tonga any Canada ny Apple News miaraka amin'ny famoahana ny iOS 12.2
Miaraka amin'ny famoahana ny iOS 12.2 ao amin'ny beta voalohany dia lasa misy ny fampiharana Apple News any Canada.
Telegram dia nohavaozina manatsara ny vondrona ary mamela antsika hamafa chat efa voafafa
Ny fampiharana fandefasan-kafatra be mpampiasa eran'izao tontolo izao dia toa tsy dia liana amin'ny fanatsarana ny ...
GoodNotes 5 dia havaozina maimaimpoana miaraka amin'ny fanavaozana ny interface
Ireo tovolahy ao amin'ny GoodNotes dia manavao ny fampiharana azy ireo amin'ny kinova fahadimy miaraka amina endrika vaovao, azontsika atao maimaim-poana izany izao raha manana GoodNotes 4 isika.
Ireo no vaovao ho tonga amin'ny fanavaozana ny PUBG Mobile manaraka
Raha te hahafantatra ianao hoe inona ny vaovao entin'ny PUBG Mobile update 10.5, dia asehonay anao ny pitsopitsony rehetra.
Ny delta redespligue avo lenta dia azo alaina ao Fortnite miaraka amin'ny kaontera fampiasana
Herinandro maromaro taorian'ny nitahirizana azy tao amin'ny trano fanatobiana ny lalao Epic, azo alaina indray ny famerenana ny glider hang fa misy fetrany maromaro.
Inona no azontsika atao amin'ny fahitalavitra mifanaraka amin'ny HomeKit
Mandritra ity taona ity dia halefa maodely vaovao amin'ny fahitalavitra vaovao mifanaraka amin'ny AirPlay 2 sy HomeKit. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao izay azonay atao amin'ity fifanarahana ity
Adobe Lightroom CC manampy fanampiana amin'ny fampiharana Shortcuts
Ny fampiharana farany izay nohavaozina mba hifanaraka amin'ny rindranasa iOS 12 Shortcuts dia ny Adobe Lightroom manampy endrika tena mamokatra.
Plex dia te-hahazo tsena amin'ny alàlan'ny fanolorana sarimihetsika sy andian-dahatsoratra miaraka amin'ny doka ho an'ny fitaovantsika
Ireo bandy ao Plex dia mety mieritreritra ny hanova ny tsenan'ny horonantsary amin'ny alàlan'ny fandefasana sarimihetsika sy andian-tsarimihetsika maimaimpoana amin'ny dokam-barotra.
Kenwood dia manolotra ny tsipika vaovao misy fitaovana Wireless CarPlay
Ny mpanamboatra Kenwood dia nanolotra tao amin'ny CES 2019 7 fitaovana vaovao mifanaraka amin'ny CarPlay tsy misy tariby.
Nintendo dia nahazo $ 348 tapitrisa tamin'ny taona 2018 tamin'ny alàlan'ny lalao finday
Ny lalao video Nintendo goavambe dia namoaka 348 tapitrisa dolara tamin'ny alàlan'ny lalao teo amin'ny sehatra finday.
AutoS sare dia mandefa endrika vaovao sy mifanentana amin'ny Siri Shortcuts
Ny fanavaozana AutoSidur vaovao dia mitondra endrika vaovao maro, toy ny fanavaozana ny interface na ny "Hygiene" ary ny "Sleep Bank".
Pandora dia mandefa ny fampiharana ho an'ny Apple Watch mamela ny fisintomana hira
Ireo mpamorona ny serivisy mivantana mozika Pandora dia manavao ny fampiharana azy ireo miaraka amina kinova vaovao ho an'ny Apple Watch miaraka amin'ny maody filalaovana ivelan'ny daholobe
Apple eo amin'ny tightrope dia manohy mamaky firaketana: ny App Store dia namorona $ 322 tapitrisa tamin'ny taona vaovao
Taorian'ny vaovao ratsy teo amin'ny tsenan'ireo tovolahy Cupertino dia nanambara izy ireo fa ny andron'ny Krismasy sy ny Taom-baovao dia namaky ny fidiram-bolan'ny App Store.
Music Year in Review, famintinana ny hetsika Apple Music anao amin'ny taona 2018
Alex Santarelli dia namoaka ny Music Year in Review, fampiharana iray izay manome ny mpamaky Apple Music ny fahaizana hanana famintinana hetsika.
Ny fampiharana iOS tsara indrindra amin'ny taona 2018
Hofaranantsika amin'ny alàlan'ny fisafidianana ireo fampiharana tsara indrindra amin'ny taona 2018 izay azontsika apetraka amin'ny iPhone, iPad, ary Apple Watch ny taona.
Tsy mamela ny fifanarahana amin'ny serivisy ho an'ny iOS intsony i Netflix
Volana vitsivitsy lasa izay, nanako ny hetsika nataon'i Netflix izay mifandraika amin'ny famandrihana ...
Epic Games dia mety ho nahazo $ 3.000 miliara tamin'ny taona 2018 noho ny Fortnite
Epic Games, noho ny Fortnite, dia nanjary milina fanaovana vola goavambe ary ahazoana tombony maherin'ny 3.000 tapitrisa dolara tamin'ny taona 2018.
Alto's Adventure sy Alto's Odyssey dia misy 0,49 euro fotsiny
Snowman, mpamorona ny Alto's Adventure sy Odyssey, dia nampidina ny vidin'ny lalao roa ka hatramin'ny 0,49 euro, tolotra iray izay tsy azontsika hadino.
Nandritra ny taona 2018, lalao vaovao maro no tonga tao amin'ny App Store. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay aminao izay lalao tsara indrindra nahatratra ny App Store tamin'ny taona 2018
Ny sivilizasiôna VI dia manome toerana sy sivilizasiona ho an'ny Krismasy
Mandritra ny andro vitsivitsy, ireo mpamorona ny sivilizasiôna VI dia mametraka senary sy sivilizasiona samy hafa tsy misy vidiny amintsika.
Ireto no lalao 5 nampiana augmented reality tsara indrindra amin'ny App Store
Manana fitaovana iOS ve ianao? Te hankafy ny lalao zava-misy tena tsara nampitomboina ve ianao? Ireto no lalao 5 tsara indrindra ankafizinao.
Andro manandanja indrindra ao amin'ny orinasa Waze: Day Cook Day
Ireo tovolahy ao Waze dia manamafy izay andro lehibe indrindra amin'ny orinasa: ny andron'ny Tim Cook, ilay andro nahafantaran'i Apple ny olan'ny Apple Maps
PlayStation mandefa ny Lemmings angano ho an'ny iOS maimaim-poana
Gaga ny PlayStation ary mandefa ny lalao Lemmings malaza ho an'ny iPhone sy iPad. Lalao izay azontsika ankafizina amin'ny famirapiratany rehetra maimaim-poana.
Kalandrie 5 raha toa ka havaozina izy ity mba hifanaraka amin'ny Apple Watch
Ny mpitantana ny kalandrie Calendars 5 dia nahazo iray amin'ireo fanavaozam-baovao nandrasan'ny mpampiasa maro: fifanarahana amin'ny Apple Watch sy Siri Shortcuts
Ny fivarotana fivarotana ofisialy Fortnite dia manokatra ny varavarany
Epic Games dia nanokatra ny magazay ofisialy Fortnite, ahafahantsika mahita akanjo ofisialy amin'ny lalao video mifandraika amin'ity taona ity.
Facebook dia hanomana ny cryptocurrency hampiasainy amin'ny alàlan'ny WhatsApp
Raha ny angom-baovao avy any Bloomberg, ireo bandy avy ao amin'ny Facebook dia mieritreritra ny handefa ny volany manokana hampiasaina amin'ny WhatsApp ho an'ny micropayments.
Natsahatry ny Sphero ny famokarana BB-8 sy R2-D2 amin'ny faran'ny fifanarahana tamin'i Disney
Ny mpanamboatra Sphero, dia nanambara fotsiny fa nifarana ny fifanarahana tamin'i Disney ary nijanona tsy nivarotra ireo vokatra natolony antsika nandritra ny taona maro.
Amin'ny farany ny Twitter dia mamela antsika handamina ny bitsika arakaraka ny fotoana. Atorinay anao ny fomba fanaovana azy
Vao avy nampandeha bokotra vaovao tao amin'ny fampiharana Twitter ho an'ny iOS i Twitter izay mamela antsika handamina mora foana ireo bitsika arakaraka ny fotoana.
Manampy ligy vaovao 2019 ny PES 12 ary mampiasa ny motera sary Unreal Engine 4
Ny lalao baolina kitra PES 2019 dia azo alaina ankehitriny amin'ny alàlan'ny fampidirana ligy vaovao 12 sy ny fampiasana ny motera sary Unic Engine Epic Games '.
Fanavaozana PUBG Mobile hanomanana ny fahatongavan'ilay sari-tany misy lanezy: Vikendi
Ny fanavaozana PUBG nandrasana hatry ny ela natolotry ny sarintany misy lanezy vaovao, Vikendi, dia efa misy, na dia tsy ho afaka roa andro aza ny sari-tany.
Apple dia manala ny fanavaozana ny app Shazam amin'ny fanavaozana vaovao
Taorian'ny fividianan'ny bandy ny orinasa an'i Cupertino dia nanapa-kevitra ny hanafoana ny doka rehetra amin'ny app Shazam amin'ny endriny rehetra i Apple.
Ahoana ny fomba hanampiana tsoratadidy amin'ny Chrome avy amin'ny Safari amin'ny iOS
Ny manampy tsoratadidy amin'ny browser Google Chrome avy amin'ny Safari dia dingana iray tena tsotra izay zahay eto ambany ary hahafahantsika manangona fotoana.
Ahoana ny fomba fanoratana naoty avy amin'ny efijery hidin-trano amin'ny iPhone na iPad-ntsika
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay aminao ny fomba ahafahanay manisy naoty amin'ny fampiharana Notes avy amin'ny efijery hidin-trano amin'ny iPhone na iPad
Inona no mitranga isa-minitra ao amin'ny App Store?
Apple dia namoaka androany tao amin'ny fizarana "Androany" ao amin'ny App Store lahatsoratra mahaliana momba izay mitranga ao ...
Apple dia manala ny asan'ny Connect ho an'ireo mpanakanto ao anatin'ny Apple Music
Ny tambajotra sosialy izay natolotry Apple ho an'ny mpanakanto tamin'ny alàlan'ny Apple Music, Connect, dia tsy misy intsony ary ny atiny rehetra navoaka hatreto dia hesorina amin'ny 24 Mey 2019.
MacTracker dia nohavaozina amin'ny alàlan'ny fanampiana ny iPhone sy iPad farany an'ny 2018
Ny fampiharana Mactracker dia navaozina ary nanampy ny vokatra vaovao rehetra navoakan'ny orinasa monina Cupertino teny an-tsena.
Tonga tao amin'ny lalao Hill Climb Racing 2 ny Noely
PlayStation App dia havaozina amin'ny tolotra manokana
Nahazo fanavaozam-baovao vaovao amin'ny PlayStation App izahay, ankoatry ny zavatra hafa, dia hahafahantsika mampihetsika ny tolotra manokana ho an'ny fampiofanana ataonay.
Algoriddim dia mandefa ilay Djay vaovao ho an'ny iOS ho afaka amin'ny alàlan'ny fomba fandoavam-bola
Ireo tovolahy avy amin'ny Algoriddim dia manova ny maodelin'ny orinasan'i Djay amin'ny famoahana azy io maimaim-poana nefa tsy mametra be loatra ny asany, eny, misy ihany koa ny kinova pro voaloa.
Asphalt 9 dia efa mamela antsika hilalao amin'ny 60 fps amin'ny iPhone XS sy iPhone XR
Ny fanavaozana farany ny Asphalt 9, dia manome antsika ho zava-baovao ny fahafaham-po mankafy ny lalao amin'ny 60 fps
Ny fanavaozam-baovao farany avy amin'i Giphy dia miharo amin'ny fakantsary TrueDepth hamoronana sticker mifangaro ary manampy ny keyboard indray
Ny app Giphy ho an'ny iOS dia nohavaozina ary nanampy fanohanana ny klavier ao amin'ny iOS 12 sy ny fampidirana miaraka amin'ny fakantsary True Depth an'ny iPhones mifanentana.
Coommand & Conquer Rivals, paikady ary fanafihana hankafizanao amin'ny iOS
Coomand & Conquer Rivals, lalao video ahafahantsika mampivelatra ny fahaizantsika eo amin'ny sehatry ny tetikady miaraka amina fanontana vaovao klasika.
Miditra amin'ny fomba ofisialy amin'ny iOS i Google Lens
Ity fahaiza-manao antsoina hoe Google Lens ity dia tsy hita ao amin'ny iOS mandraka ankehitriny, izay navoaka tamin'ny alàlan'ny fampiharana ofisialy.
Epic Games dia manala ny trilogy Infinity Blade amin'ny App Store
Ny epic Games dia nisintona tao amin'ny magazay fampiharana an'i Apple, ny andian-tantara Infinity Blade, satria tsy afaka manolotra anao ny fanohanana lazainy fa tokony hahazo ity andiany ity.
Netflix dia hiteraka fidiram-bola betsaka noho ny iOS
Mivoaka ny vaovao fa mety hahazo vola 47% bebe kokoa i Netflix amin'ny alàlan'ny fampiharana finday raha oharina tamin'ny taona lasa.
Lego Playgrounds AR dia misy ao amin'ny App Store
LEGO Augmented Reality Azo alaina amin'ny iPhone amin'ny alàlan'ny LEGO Playgrounds AR
Ny hitsin-dàlana dia havaozina amin'ny alàlan'ny fampidirana ny hetsika Post to Tumblr ary ny fanitsiana bug maro
Ny fampiharana Shortcuts dia nahazo fanavaozana vaovao izay manamboatra bug maro be ary manampy ny hetsika Post to Tumblr
Ny Season 7 dia tonga ao Fortnite mamela ny iPad Pro 2018 hilalao amin'ny 60 fps
Amin'ny fahatongavan'ny vanim-potoana 7, Fortnite ho an'ny iOS dia efa mamela antsika hilalao amin'ny 60 fps amin'ny iPad Pro, zavatra iray efa azontsika atao amin'ny iPhone XR, iPhone XS ary iPhone XS Max
Ny Calcbot ho an'ny iOS dia nohavaozina amin'ny fiverenana any amin'ny Apple Watch
Ireo tovolahy ao amin'ny Tapbots dia manavao ny fampiharana calculator Calcbot izay mamerina azy io any amin'ny Apple Watch taorian'ny fahatongavan'ilay Apple Watch Series 4 vaovao.
Ahoana ny fampandehanana ny horonan-tsary mandeha ho azy amin'ny tabilao Youtube
Ny famoahana ny famerenana an-tsarimihetsika ny horonan-tsary mandeha ho azy ao amin'ny YouTube dia dingana iray tena tsotra izay tsipihanay amin'ity lahatsoratra ity.
Apple dia manambara ny fampiharana tsara indrindra sy ny lalao tsara indrindra amin'ny taona 2018, ankoatry ny fahombiazana hafa
Aseho anao eto ambany izay lalao tsara indrindra, fampiharana tsara indrindra, rakikira tsara indrindra, horonantsary alaina indrindra ... avy amin'ny Apple mandritra ny taona 2018
Apple manakana ny fivarotana iPhone tsy ho voasakana any India, ahafahan'ny fampiharana misoroka ny finday SPAM
Apple dia nanakana ny fivarotana iPhone tsy ho voasakana any India, mamela ny fandefasana fampiharana ao amin'ny App Store hanakana ny isa SPAM
Manome fanampiana ho an'ny Siri Shortcuts ny Deliveries
Azontsika atao izao ny manontany an'i Siri, ohatra, rehefa ho tonga ny fandefasana antsika manaraka noho ny Deliveries ho an'ny iPhone
Socratic dia hanao ny entimodinao nefa tsy mila mandany fotoana
Socratic dia fampiharana iray ahafahanao manao devoara matematika sy karazana raikipohy rehetra tsy misy fahasarotana.
Ny Fortnite ho an'ny iOS dia nohavaozina ary ahafahantsika milalao amin'ny 60 fps
Ny fanavaozana farany Fortnite dia manolotra antsika ho ny zava-baovao sy lehibe indrindra ao anatin'ny ekosistra iOS, ny mety hilalao hatramin'ny 60 fps
YouTube Music Premium sy YouTube Premium dia efa manana drafitra ho an'ny mpianatra
Ny serivisy mozika mozika Google dia nanangana drafitra vaovao ho an'ny mpianatra, drafitra manome fihenam-bidy 50%
Pluszle, lalao mampiankin-doha hampiasanao ny arithmetika ara-tsaina
Ny lalao iray dia tsy tokony hampiala voly fotsiny. Pluszle dia fifangaroana eo amin'ny fiankinan-doha, fialamboly mahafinaritra ary fivoaran'ny matematika ara-tsaina, fifangaroana tonga lafatra.
Kingdom Rush Vengeance, ny fiverenan'ny Tower Defense tsara indrindra
Ny iray amin'ireo sagas fiarovana tower malaza indrindra dia miverina miaraka amina fizarana vaovao mitazona ny hatsarany sy ny safidiny vaovao.
CSR Racing 2 dia ahafahantsika mamerina sy mifaninana amin'ireo fiara mahazatra aorian'ny fanavaozana farany azy
Ny lalao hazakazaka CSR Racing 2 dia vao nohavaozina ary nanisy fiasa vaovao roa izay mahatonga ity fanavaozana ity ho zava-dehibe indrindra hatramin'izao.
Alto's Odyssey misy fihenam-bidy 40% manararaotra ny Black Friday
Black Friday koa dia misy ao amin'ny App Store izay ahitantsika ny lalao Alto's Odyssey mahafinaritra miaraka amin'ny fihenam-bidy 40%.
Instagram dia hanisy fiovana eo amin'ny sehatry ny mpampiasa hahamora ny fampiasana azy
Ny fiaraha-monina ankafizin'ny mpampiasa miliara, Instagram, dia hahazo fanovana eo amin'ny sehatra interface amin'ny herinandro ho avy
Assassin's Creed Rebellion dia azo alaina ao amin'ny App Store
Ny sassassa Assassin's Creed dia nanjary kilalao teo amin'ny tontolon'ny lalao video, izay nahavita ...
Netflix ho an'ny iOS dia navaozina tamina mpilalao vaovao ho an'ny andian-tsarimihetsika sy sarimihetsika
Netflix dia nanavao ny fampiharana azy ho an'ny iOS manatsara ny mpilalao mba hahamora kokoa azy ny mankafy ny atin'ny katalaoginy.
Alefaso ny fankahalanao ny lehibenao amin'ny Beat the Boss 4
Miverina miaraka amin'ny Beat the Boss 4 izahay, lalao video ahafahanao manala ny fankahalana rehetra ateraky ny lehibenao, ary amin'izany dia esorinao ny adin-tsainao.
Tsy mitsahatra mandrindra angona amin'ny alàlan'ny iCloud i Beddit
Ny rindrambaiko Beddit izay miasa miaraka amin'ny fitaovana hanaraha-maso ny torimaso, dia nijanona tsy nanohana ny fitahirizana kopian'ny data ao anaty rahona.
Cortana ho an'ny iOS dia manavao tanteraka ny interface
Ny rindrambaiko mpanampy an'ny Microsoft, Cortana, ho an'ny iOS dia nahazo endrika fanamoriana lehibe, nanitsy tanteraka ny interface ary nahatonga azy ho intuitive kokoa.
Castro 3.2 misy izao miaraka amin'ny vaovao mahaliana ho an'ny Sideloads
Castro dia manohy mihatsara, ary amin'ny fanavaozana farany farany dia afaka manampy rakitra audio mivantana avy any Safari izahay amin'ny tsindry roa.
Manampy faritra ao anatin'ny safidin'ny fikarohana ny Twitter
Ny fampiharana Twitter dia nanomboka nanolotra ny mombamomba ny asa fikarohana voasokajy ho sokajy.
Ny fampiharana ny sary an-taratasy an'i FiftyThree dia nohavaozina mba hanararaotana ireo endri-javatra vaovao ao amin'ny Apple Pencil 2
Fampivoarana ny sary sy fanoratana an-taratasy an'i Fifty Three's vao nohavaozina mba hanohanana ny endri-paompy indroa an'ny Apple Pencil 2
Ny fitaovam-piadiana manaraka izay hataon'i Fortnite dia nofy ratsy ho an'ny fananganana
Ny fitaovam-piadiana manaraka izay ampidirin'i Fortnite amin'ny fanavaozana manaraka dia ny turret nitaingina base, fitaovam-piadiana mety handrava haingana ireo tranon'ny fahavalo.
Ny app Netflix dia havaozina mba hifanaraka amin'ny efijery an'ny iPad Pro vaovao
Ny rindrambaiko Netflix, serivisy lehibe indrindra manerantany amin'ny sehatry ny horonantsary mivantana, dia navaozina mba hifanaraka amin'ny famahana ny iPad Pro vaovao.
Cloudflare dia mandefa ny fampiharana 1.1.1.1 mba hahamora kokoa ny mifamadika amin'ny DNS anao
Ireo tovolahy ao Cloudflare dia te hanohy handresy lahatra anay amin'ny DNS manokana (1.1.1.1) amin'ny alàlan'ny fampiharana vaovao izay manamora ny fanovana ny DNS amin'ny iOS.
Horizon Chase - World Tour, lalao misy fahaiza-manao sy sary amin'izao fotoana izao izay manome voninahitra ny fitaterana arcade mandritra ny androm-piainany.
Ny pejy sy ny GarageBand dia havaozina manampy fiasa vaovao
Na ny fampiharana famoronana mozika, GarageBand, ary ny suite iWork, dia navaozina mba hanampiana fiasa vaovao ary koa fanatsarana ny fitoniana sy ny fampisehoana.
iMovie dia havaozina mamela antsika hampiasa monitor ivelany hijerena ilay horonantsary
Ny fanavaozana farany iMovie dia ahafahantsika mampifandray ny iPhone na iPad amin'ny monitor ivelany ary mifidy izay tiana haseho eo amin'ny efijery.
Fanavaozana Twitterrific sy Tweetbot mba hifanaraka amin'ny efijery iPad Pro vaovao
Ireo mpanjifa Twitter roa ho an'ny iOS, Tweetbot ary Twitterrific dia efa nohavaozina mba hifanaraka amin'ny efijery an'ny iPad Pro vaovao.
Apple dia namoaka fanavaozana vaovao ho an'ny fampiharana iOS antsoina hoe Clips, manampy isa maro vaovao, sehatra selfie, sticker ...
Mpiara-miasa Fortnite amin'ny NFL ary hanampy fanamiana ekipa ligy
Manomboka amin'ny 10 Novambra, ho hita ao Fortnite ny akanjo anaovan'ny mpilalao NFL, amin'ny alàlan'ny fividianana fampiharana.
Nike + Run Club Updates Manolotra Fanohanana ho an'ny Soso-kevitra Siri
Misaotra ny fangatahana Nike + Run Club, ary aorian'ny fanavaozana farany, i Siri dia hanolotra ny fotoana mety indrindra handehanana
Kingdom Rush Vengeance, fiverenan'ny Tower Defense tsara indrindra amin'ny 22 Novambra
Iray amin'ireo lalao tsara indrindra amin'ny sokajy misy azy ny miverina, Kingdom Ruch Vengeance, azo alaina amin'ny 22 Novambra ho an'ny iPhone sy iPad
Blizzard dia manamafy ny Diablo ho tonga amin'ny iOS miaraka amin'ny lalao Diablo Immortal
Ireo tovolahy ao amin'ny Blizzard dia manambara ny fahatongavan'ilay franchise RPG malaza indrindra amin'ny fotoana rehetra amin'ny iOS: Diablo Immortal.
Ny antso vondrona miaraka amin'ny antoko 32 amin'ny alàlan'ny FaceTime dia tsy misy afa-tsy amin'ny iPhone 6s sy iPad Air 2 ary iPad Mini 4.
Tamin'ny famoahana ny iOS 12.1, ireo tovolahy avy ao Cupertino dia nanararaotra ary namoaka fanavaozana vaovao ho an'ny fampiharana Shortcuts.
Ny mpanjifa mail an'i Outlook dia navaozina mba hifanaraka amin'ny efijery an'ny iPhone XS Max sy iPhone XR
Raha mitady rindrambaiko hitantanana ny mailakao avy amin'ny iPhone ianao, Microsoft Outlook dia safidy tsara indrindra tokony hoheverinao.
Amboary mora foana ny famahana ny sarinao amin'ny CropTop
Ny fanovana ny habe / ny famahana ny sary ankafizinay hampiasana amin'ny antontan-taratasy dia tsy mora velively tamin'ny fampiharana CropTop.
Apetrakay amin'ny fitsapana, ny loha-loha-loha ny HomePod sy Amazon Echo, hahitantsika hoe iza amin'ireo mpanampy roa no hendry kokoa, Siri na Alexa.
Izany no fiasan'ny WhatsApp Stickers vaovao
WhatsApp dia efa mamela anao handefa sy handray sticker, ary omenay anao ny antsipiriany rehetra momba ny fomba fiasan'ity endri-javatra vaovao ity amin'ny iPhone.
Efa ofisialy izao, WhatsApp dia manamafy ny fahatongavan'ireo sticker amin'ny fampiharana azy
Ireo tovolahy avy amin'ny WhatsApp dia manamarina ny fahatongavan'ireo sticker amin'ny fampiharana miaraka amin'ny fahafaha-manao sticker amin'ny mpamorona antoko fahatelo.
Navaozina ihany koa ny PUBG hankalazana an'i Hallowen miaraka amina mode night, fitaovam-piadiana ary fiara vaovao
Ny Battle Royale tena misy azo tsapain-tanana izay hitantsika ao amin'ny App Store, PUBG Mobile, dia vao nohavaozina nanampy ny antony Halloween, fitaovam-piadiana ary fiara vaovao.
Fanavaozana Fortnite hankalazana an'i Hallowen dia manampy zombies sy fitaovam-piadiana vaovao
Ny lalao mahomby indrindra amin'ny Apple App Store, ary saika manerana an'izao tontolo izao, Fortnite dia nohavaozina mba hankalazana an'i Hallowen.
Airline Commander, simulator rivotra mampiala voly
Airline Commander, lalao video simulation aerial izay any amin'ny faritra avo amin'ny fitsapana iOS maimaimpoana.
Hanomboka ny Messenger 4 vaovao tsy ho ela ny Facebook amin'ny alàlan'ny fitetezana tsotra sy fomba maizina vaovao
Tsy milavo lefona ry zalahy ao amin'ny Facebook ary handefa ilay Messenger 4 vaovao miaraka amina endrika tsotra sy maody maizina vaovao.
WhatsApp dia nohavaozina amin'ny interface vaovao ao amin'ny hafatra sy ny fanohanana ny iPhone XS Max
Ny rindranasan-kafatra hafatra WhatsApp dia nohavaozina mampiseho interface vaovao rehefa mampiseho ny safidy azo ifandraisana amin'ireo hafatra
Tweetbot 5 tonga miaraka amina kisary vaovao sy maody maizina amin'ny saina
Tonga izao ny Tweetbot 5 miaraka amina kisary nohavaozina sy ny maody maizina ho zava-baovao, ho ampy ve ny mitazona ny besinimaro na dia very aza ny asany?
Nohavaozina ny Spotify ary nanampy fampiasa vaovao ho an'ireo mpizara
Ny fanavaozana farany an'i Spotify dia manatsara ny isan'ny safidy izay nalain'ny mpamandron'ity sehatra ity hatreto.
Pokémon vaovao dia ho tonga any Pokémon GO
Saika hatramin'ny nanombohan'ny lalao Pokémon GO, noforonin'i Niantic ary manana an'i Nintendo ny zony, manana ...
Ny fampiharana Nike + Run Club dia mifanaraka amin'ny Apple Watch Series 4 izao
Ny fampiharana Nike + Run Clu natao ho an'ny mpihazakazaka, dia nohavaozina mba hifanaraka amin'ny haben'ny efijery amin'ny Apple Watch Series 4
Nohavaozina ny paosy ary izy no miandraikitra ny famakiana ireo lahatsoratra notehirizinay
Ny vakio ity Aorian'izay, ny fampiharana Pocket dia navaozina tamin'ny fampidirana asa iray izay tompon'andraikitra amin'ny famakiana ireo lahatsoratra izay notehirizinay tao amin'ny kaontinay.
Ny navigator Sygic GPS dia mandefa ny fanavaozana izay mamela ny fampiasana azy amin'ny Apple CarPlay
Ireo tovolahy avy any Sygic dia nandefa ny fampifanarahana ny navigator GPS niaraka tamin'ny rafitra CarPlay an'i Apple mba hahafahanay mampiasa azy io ao anaty fiara.
Ny Facebook izao dia mamela antsika haka sary 3D miaraka amin'ireo sary raisinay amin'ny maody fakana sary
Tonga hatrany amin'ny tambajotra sosialy Facebook ireo sary 3D. Ampiasao ny sarinao alaina sary hahitana ny fomba fivelaran'izy ireo eo amin'ny rindrinao.
Google Photos dia mamela antsika hamorona rakipeo olona sy biby fiompy mandeha ho azy
Ny fanavaozana farany ny Google Photos ho an'ny iOS, dia mamela antsika hamorona rakipeo miaraka amin'ny olona sy ny biby fiompy ho azy fa tsy mila manampy ireo sary vaovao azontsika.
Stardew Valley dia ho tonga amin'ny App Store tsy misy fandoavam-bola tafiditra
Ireo mpamorona RPG hafahafa antsoina hoe Stardew Valley dia nanapa-kevitra ny handefa ny lalao video miaraka amina fandoavam-bola tokana ary tsy misy fifanakalozana bitika ao amin'ny iOS App Store.
Apple dia manamboatra ny olana izay tsy naseho ireo podcast ambony naoty ambony
Ny tahirin'ireo podcast henoina sy nakarina indrindra avy amin'ny Podcast an'i Apple dia namboarina noho ny antony sasany, mampiseho ny angona izay lavitra ny zava-misy.
Evoland, ilay RPG mahafinaritra miaraka amin'ny fihenam-bidy mahery setra
Evoland, ity RPG mandroso ity izay miala amin'ny kely ka hatramin'ny ratsy dia mijanona amin'ny vidiny mampihomehy izay mahatonga azy io ho voatery hividy.
Pixelmator dia mifanaraka amin'ny iOS 12 ankehitriny
Ny mpanonta sary Pixelmator, ao amin'ny kinova ho an'ny iOS, dia navaozina mba hifanaraka tanteraka amin'ny iOS 12
Ahoana ny fandefasana horonantsary amin'ny alàlan'ny WhatsApp amin'ny endrika GIF
Ny fanovana horonantsary ho endrika GIF hanovana azy amin'ny alàlan'ny WhatsApp dia dingana iray tena tsotra izay tsy mila fampiharana an'ny antoko fahatelo
Ny vola miditra Fortnite dia mahatratra 300 tapitrisa $ amin'ny iOS
Ny lalao lamaody amin'ny iOS dia mbola Fortnite, porofon'ireo angon-drakitra fidiram-bola novokarin'ny fampiharana hatramin'ny nanombohany.
Volana vitsivitsy lasa izay, navotsotra ho an'ny iPad ny Sin Meier Civilisation, na izany aza, mamoaka ny kinova ho an'ny iPhone izy ankehitriny ary mankalaza izany amin'ny fihenam-bidy.
Ny jiro Philips Hue dia manohana ny Siri Shortcuts izao
Ny takamoa maranitra Philips Hue dia manohana an'i Siri Shortcuts aorian'ny fanavaozana ny app iOS.
Fantastical 2 dia nohavaozina manampy fanampiana ho an'ny Siri Shortcuts, mifanentana amin'ny iPhone XS Max sy Series 4
Ny fampiharana fitantanana kalandrie Fantastical 2 dia navaozina hanararaotra izay vaovao ao amin'ny iOS 12
Ny fampiharana Twitter dia manampy fiasa vaovao hamonjy angona finday
Ny fampiharana Twitter ofisialy dia nohavaozina mba hanatsarana ny toerana fampiasana angon-drakitra momba ny filalaovana video.
Ahoana ny fomba hanokafana ireo rohy fampiharana YouTube ao amin'ny Chrome fa tsy amin'ny Safari
Raha mpampiasa tsy mivadika amin'ny rindranasa Google ianao, etsy ambany dia hasehonay anao ny fomba hanokafana ireo rohy YouTube mivantana ao amin'ny Google Chrome
Afaka mandefa GIF avy amin'i MD amin'ny Instagram ianao izao
Ankehitriny ny fanavaozana farany indrindra dia nitondra GIF ho amin'ny fandefasana hafatra mivantana, na dia tsy nalaza be fotsiny aza ireo hafatra ireo.
Na eo aza ny fitomboan'ny Apple News, mijanona ho kely ny vola azon'ny mpanonta
Ny sehatry ny vaovao Apple, Apple News, dia mitoetra ho loharanom-bola tsy dia hita loatra ho an'ireo mpanonta manolotra ny lahatsorany.
Ny mpandrindra ny IOS izao dia manamora kokoa ny mizara ny betas-ny
Mora kokoa ny mizara betas fampiharana iOS ankehitriny noho ny fahafahan'ireo mpamorona mizara ampahibemaso rohy fampidinana
Apple dia namita ny fividianana an'i Shazam tamin'ny farany taorian'ny OK an'ny Union
Taorian'ny fahazoan-dàlana avy amin'ny kaomisionan'ny fifaninanana EU, Apple dia namita ny fividianana ny orinasa Shazam miaraka amin'ny fikasana hampiditra ny haitao rehetra ao aminy.
Fiankinan-doha amin'ny Fortnite, iray amin'ireo antony fisaraham-panambadiana raha ny angona farany
Ny fiankinan-doha izay iaretan'ny olona sasany amin'ny lalao video Fortnite, dia nanomboka loharanom-pahafinaretana tany Angletera.
Ny mpanjifa mailaka Spark dia nohavaozina mba hanararaotra ireo fiasa vaovao amin'ny iOS 12
Ny mpanjifa mailaka Spark dia navaozina mba hanararaotra ny sasany amin'ireo fiasa vaovao avy amin'ny iOS 12
GarageBand, Apple Support ary TV Remote dia novaina mba hifanaraka amin'ny iOS 12
Ny telo amin'ireo rindranasa ampiasain'ny mpampiasa iOS indrindra, GarageBando, Apple Support ary TV Remote dia navaozina ho 100% mifanaraka amin'ny iOS 12.
Google Maps dia manohana an'i CarPlay ihany
Rehefa afaka taona maro niandrasana dia efa misy ao amin'ny CarPlay ny fampiharana Google Maps. Ny fampiharana an-tsarintany manaraka hanao izany dia Waze.
Ny lozisialy Telegram dia hosoloina Telegram X, fampiharana manana fanjifana bateria sy fahombiazana tsara kokoa
Tao anatin'ny roa herinandro, araka ny notaterin'ny lehiben'ny Telegram, Pavel Durovx, Telegram X dia hisolo an'i Telegram.
1Password dia vitamina amin'ny fahatongavan'i iOS 12 amin'ny fitaovantsika
Ny ekipan'ny mpamorona 1Password dia namoaka fanavaozana vaovao hampidirina amin'ny vaovao rehetra navoakan'ny Apple ao amin'ny iOS 12.
Fampivoarana iWork hanararaotana ny zava-baovao ao amin'ny iOS 12
Ny efitrano fiasan'ny biraon'i Apple ho an'ny iOS, iWork, dia navaozina vao haingana mba hanomezana mifanentana amin'ireo zava-baovao ao amin'ny iOS 12
Chrome for iOS dia mahazo endrika vaovao sy endrika vaovao
Ny browser an'ny Google, Chrome, dia navaozina vao nanampy fiasa vaovao ary nanatsara ny sasany izay efa natolony.
Google dia manambara ny fanidiana ny Inbox amin'ny taona ho avy
Rehefa nandeha ny tsaho nandritra ny volana maro, Google dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy fa hijanona tsy hanome serivisy amin'ny alàlan'ny Inbox amin'ny volana martsa 2019.
iPhone XS sy XS Max: ny endri-javatra rehetra, ny vidiny ary ny misy
Raha mbola tsy azonao antoka hoe iza ilay maodely iPhone vaovao mifanaraka amin'ny zavatra ilainao, etsy ambany dia asehonay anao ny fiasa rehetra, ny vidiny ary ny fisian'ny maodely vaovao ho an'ny taona 2018.
Apple dia manentana hatrany amin'ny fampiasana ny famandrihana eo amin'ireo mpamorona
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia nandefa horonantsary vaovao tao amin'ny vavahadim-pampivoarana manasongadina ny maha-zava-dehibe ny famandrihana ho azy ireo.
Ireo no vaovao lehibe amin'ny fanavaozana ny PUBG Mobile manaraka
Nandritra ny volana vitsivitsy dia azontsika atao ao amin'ny App Store ny fampiharana roa izay nanova ny tontolon'ny lalao video mobile. Ny fanavaozana ny PUBG Mobile manaraka, ary izay ho hita rahampitso tontolo andro, dia hanolotra vaovao lehibe ho antsika toy ny sari-tany vaovao, fiara ary fitaovam-piadiana.
Epic Games dia nilaza fa miasa izy ireo mba hanatsarana ny fampisehoana Fortnite amin'ny iOS
Tao anatin'izay volana vitsivitsy izay dia hitantsika ny fomban'ny Fortnite eo amin'ny molotry ny tsirairay, ao anatin'izany ny vaovao, na ho an'ny tsara na ho an'ny tanana. Fortnite Ny fanavaozana farany Fortnite ho an'ny iOS, dia manome fidinana an-tsehatra izay nahatonga ny fahatezeran'ny mpilalao maro.
Apple dia te-hanohy hanatsara ny vaovao ary manakarama mpanatanteraka teo aloha Condé Nast
Tamin'ny volana Mey lasa teo, naverinay ny tsaho milaza fa afaka mividy Condé Nast i Apple, tsaho iray nanjary haingana Na eo aza ny fanitarana ny vaovao any amin'ny firenen-kafa dia mitohy malemy, ny orinasa any Cupertino kosa dia mbola nanampy fanampim-baovao.
Fanavaozana WhatsApp vaovao izay ahafahanao mijery sary amin'ny fampandrenesana
Ny fanavaozana ny WhatsApp dia mamela ny safidy hijerena ireo rakitra multimedia nalefa taminay avy tamin'ny fampandrenesana
Ahoana ny fomba hampiasana maody maizina amin'ny YouTube
Ny maizina mode dia lasa, hatramin'ny nanombohan'ny iPhone X miaraka amin'ny efijery OLED, iray amin'ireo laharam-pahamehana indrindra amin'ny mpampiasa maro rehefa mampandeha ny maizina amin'ny YouTube dia fomba fanao tena tsotra izay ahafahantsika mitahiry bateria betsaka raha manao izany isika fampiasana tsy tapaka ity fampiharana ity.
Twitter dia manandrana rafitra fandefasan-kafatra vaovao miaraka amin'ny tondro fanaovana hetsika
Twitter koa te-hiditra amina fampiharana fandefasan-kafatra ary manandrana interface vaovao miaraka amin'ireo tondro famantarana.
Dragalia Lost no Nintendo vaovao ho an'ny iPhone ary ho tonga amin'ny 27 septambra
Nintendo dia manamafy ny fahatongavan'ny RPG miaraka amin'ny loko atsinanana, Dragalia Lost, ho an'ny iDevices ho an'ny 27 septambra ho avy izao.
Apple dia hanolotra fivoriana manokana maharitra 30 minitra hahafahantsika mianatra manova ny sarinay amin'ny iPhone
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia manomboka manolotra fotoana maharitra 30 minitra any Etazonia hianaranao ny fanovana sary amin'ny iPhone.
Veloma ho an'i Onavo angano, Facebook dia mandalo ny hoopan'i Apple amin'ny fisintomana ny fampiharana azy
Ireo tovolahy avy ao amin'ny Facebook dia manapa-kevitra ny hanafoana ny Onavo VPN, ka hahafantatra ny fanangonana nataon-dry zareo tamin'ny fampiharana.
1Password dia miharo amin'ny famolavolana autofill ao amin'ny iOS 12
1Password dia hampiditra tsy misy fotony amin'ny rafitra ao amin'ny iOS 12 ary hahafahantsika mameno tsara ny usernames sy ny tenimiafintsika mora foana.
Ataovy miaraka amin'ny iPhone sy ny Wikiloc ny Camino de Santiago
Wikiloc dia rindranasa iray izay manolotra làlana hankafizanao ny natiora ary tonga lafatra miaraka aminao ao amin'ny Camino de Santiago
Raha iray amin'ireo tsy mandoa Spotify ianao dia afaka mandingana ny doka manelingelina tsy misy fetra
Spotify dia manomana fiovana lehibe amin'ny maodalma maimaimpoana mamela ny mpampiasa handingana ny doka izay lalaovina eo afovoan'ny playlist.
Attention! Ny hafatra WhatsApp dia azo ovaina ao anaty resaka
Ny orinasan-tserasera Israeliana fiarovana amin'ny Internet dia mety hahita bibikely mamela antsika hanova hafatra WhatsApp amin'ny vondrona misy antsika.
Ny basim-borona misy barika roa sosona, azo alaina amin'ny fanavaozana farany Fortnite
Fortnite sy PUBG no nanjary lalao nandaha-teny betsaka indrindra tamin'ity taona ity, satria manolotra fanandramana vaovao ho anay amin'ny lalao The fashionable amin'ny sehatra rehetra, Fortnite, izy ireo vao nahazo fanavaozana vaovao nanampy fitaovam-piadiana vaovao sy fanatsarana ny fitifirana.
Gmail for iOS dia hahafahantsika manafoana ny fananganana mailaka amin'ny resaka
Rehefa nandeha ny taona, ny isan'ny safidy natolotry ny serivisy mailaka sy ny fampiharana samihafa hitantanana ny mailakay, ny mailaka Gmail ho an'ny iOS dia hamela anay ao anatin'ny andro vitsivitsy hanafoanana ny fananganana mailaka amin'ny alàlan'ny resaka, ary koa ny kinova desktop.
Ampidino amin'ny alàlan'ny Controller for HomeKit ny fametrahana ny 'Home' anao
Sasatry ny mandany fotoana hamerenana amin'ny laoniny ny toe-javatra HomeKit? Controller ho an'ny HomeKit dia mitondra antsika ireo backup efa nandrasana hatrizay mba tsy hahavery antsika na inona na inona.
Pokémon GO dia miomana hanampy ny ady nandrasana hatry ny ela eo amin'ny mpilalao
Ireo tovolahy tao Niantic dia afaka nitondra antsika ny fomba fiadiana Pokémon GO andrasana indrindra dia mety ho tonga amin'ny faran'ny taona hamelomana indray ny fampidinana ny lalao.
Manampy ny mpanohana ny lalao ny PUBG amin'ny fanavaozana farany azy
Ireo ankizilahy ao amin'ny PUBG dia manavao ny fampiharana azy ireo ho an'ny iOS ary manampy fanampiana ho an'ireo mpanara-dalao lalao video mahazatra ho an'ny finday.
Ireo tovolahy ao amin'ny Plex dia manampy ny fisintomana podcast amin'ny app ho an'ny iOS, hahafahantsika maka ireo podcast ankafizinay sy mihaino azy ireo tsy misy tamba-jotra.
Fire Emblem Heroes dia namorona 400 tapitrisa $ ho an'ny Nintendo amin'ny finday
Ny lalao voalohany an'ny orinasa Japoney Nintendo amin'ny sehatra finday dia ny Mario Run, lalao izay tsy namokatra ny fanantenana andrasana tamin'ny voalohany. Ny fahombiazan'ny Nintendo hatramin'ny nahatongavany tamin'ny sehatra finday dia mitohy ary ho Heroes amin'ny Fire Fire mandritra ny fotoana maharitra.
Hello Neighbor dia lalao mangingina sy mahatsiravina izay hampifaly anao
Hello Neighbor dia traikefa nahafahana mitazona antsika amin'ny fihenjanana, tsy maintsy miditra amin'ny tranon'ilay mpifanila trano isika raha tsy hita.
Dropbox Paper dia nohavaozina manatsara ny endriny
Ny fanavaozana Dropbox Paper vaovao dia manampy endrika fanaingoana ho an'ny Adobe Illustrator PDF sy ireo rakitra mialoha.
Google Maps dia hilaza amintsika hoe iza no trano fisakafoanana tsara indrindra arakaraka ny tsirony
Ny fahavaratra, ary indrindra rehefa eo am-pialan-tsasatra isika dia matetika no fotoan'ny taona raha samy mampiasa ny Apple Maps sy Google Maps indrindra isika, na dia eo aza ny fanavaozana farany ny Google Maps, dia hahafahantsika hahafantatra haingana izay trano fisakafoanana tsara indrindra ao ny faritra mifanaraka amin'ny tsirontsika.
Ny app Apple Store dia nohavaozina miaraka amin'ny sehatry ny fikarohana vaovao
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, ny orinasa monina ao Cupertino dia nanandrana nanova ny fomba fifandraisan'ny mpiserasera amin'ilay orinasa, indrindra ny fampiharana Apple Store, izay vao avy nahazo vaovao farany izay nanatsarana ny rafitra. .
Google Street View dia mifanaraka amin'ny efijery iPhone X
Google dia vao avy namoaka fanavaozana vaovao ho an'ny fampiharana Google Street View, fanavaozana izay farany mampifanaraka azy amin'ny efijery an'ny The Google application farany izay nohavaozina mba hifanaraka amin'ny efijery an'ny iPhone X dia ny Google Street View
Netflix dia manampy sary miisa 100 mahery ho antsika hahafahanay manokana ny famandrihana
Ianao angamba efa nahatsikaritra, Netflix dia nanavao ny sary famantarana ny mombamomba izay noforoninay tamin'ny fampidirana olo-malaza malaza tsy tambo isaina.
Ny fampiharana fanovana sary tsara indrindra amin'izao fotoana izao
Asehonay anao ireo rindranasa fanovana sary telo mahery indrindra amin'izao fotoana izao ao amin'ny App Store: Pixelmator, Darkroom ary Enlight.
Sygic dia mampiseho ny fiasan'ny fampiharana ao amin'ny Apple CarPlay
Sygic for CarPlay dia zava-misy, ireo tovolahy avy amin'ny mpitety tranonkala malaza dia mampiseho antsika amin'ny horonan-tsary ny fomba fiasan'izy ireo ao amin'ny CarPlay.
Ny Augmented Reality dia tonga amin'ny fampiharana Amazon mba hanampy antsika amin'ny zavatra kely
Amazon dia misy fampiharana Augmented Reality amin'ny fampiharana izay ahafahantsika mamantatra sy mividy zavatra madinidinika toy ny visy
Ny fampiharana Banco Santander dia nohavaozina miaraka amin'ny vaovao mahaliana
Ny fampiharana Banco Santander, rindranasa izay misy zavatra betsaka tokony hatsaraina ary toa mihaino ny filan'ny mpanjifa dia holazainay aminao ny vaovao.
Lahatsary 360-degree izao dia mifanaraka amin'ny app VLC
Ny fanavaozana VLC vaovao dia manamboatra olana maro ary mampifanaraka azy amin'ny horonantsary 360-degree sy ny Chromecast an'i Google.
Ny vola azo avy amin'ny App Store dia avo roa heny vokarin'ny Google Play Store
Ny fivarotana fangatahana dia nanjary ny lehibe indrindra, ary indraindray ihany no fomba tokana hametrahana fampiharana amin'ny rafitra fiasa. App Ny vola miditra novokarin'ny magazay fampiharana Apple dia avo roa heny izay novokarin'ny Google Play Store nandritra ny 6 volana voalohany tamin'ny 2018
Amerigo, ilay rindranasa fampidinana karazana atiny rehetra amin'ny iPhone sy iPad, dia manavao ny interface sy manampy asa vaovao
Ny rindranasa Amerigo, iray amin'ireo mpitantana fampidinana tsara indrindra ho an'ny iPhone sy iPad, dia nanavao tanteraka ny interface-ny ary nanampy fiasa mahaliana.
Ny Firefox Focus dia nohavaozina amin'ny alàlan'ny fanampiana andraikitra takian'ny mpampiasa
Ny fanavaozana farany ny tranokala Mozilla Foundation izay mifantoka amin'ny fiainana manokana, Firefox Focus, dia ahafahantsika mikaroka ireo tranonkala vangiantsika
Ireo no fampiharana malaza indrindra ao anatin'ny 10 taona an'ny App Store
Facebook Messenger, Minecraft, ary WhatsApp no ​​tampon'ny lisitr'ireo fampiharana malaza indrindra ao amin'ny App Store amin'ny faha-XNUMX taonany.
Chirp for Apple Watch dia manampy fiasa vaovao toy ny playback of GIFs
Ny GIF ankoatry ny zava-baovao tsy fantatra dia tsy hita tao Chirp, iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra afaka mampiasa Twitter amin'ny Apple Watch.
Newton dia nohavaozina miaraka amin'ny vaovao ary manondro fiakaran'ny vidiny
Newton dia manana vaovao vaovao, hanampy endrika vaovao antsoina hoe Recap izy ary koa manararaotra mampiakatra ny vidin'ny famandrihana.
Google dia manavao ny fampiharana Inbox mba hifanaraka amin'ny iPhone X
Ny fanavaozana efa nandrasana hatry ny ela tamin'ny fampiharana Inbox ho an'ny iPhone X dia efa hita ao amin'ny App Store.
Telegram dia miova amin'ny iOS 12 ary manampy fiasa vaovao amin'ny fanavaozana farany azy
Telegram, ny rindrambaiko fandefasan-kafatra miaraka amin'ny fiavian'i Rosiana dia nohavaozina ary mifanaraka tanteraka amin'ny iOS 12 izao ary manampy fiasa vaovao.
Dr. Panda: Farm, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny lalao maimaim-poana asehonay anao anio dia ny Dr. Panda: Farm, lalao ho an'ny ankizy kely ho tonga tantsaha.